Mobile Marketing na-alọghachi na Vogue – Olee otú Brands nwere ike akpaaka na ọnụ ọgụgụ-elu ha Mobile Mgbasa Ozi? | Martech Zone
Onye ọ bụla na-anabata ngwaọrụ mkpanaka ebe niile. N'ọtụtụ ahịa taa - ọkachasị na mba ndị na-emepe emepe - ọ bụghị naanị ikpe mobile izizi ma mobile naanị.
Maka ndị na-ere ahịa, ọrịa na-efe efe kwalitere ịkwaga na dijitalụ n'otu oge ahụ ka a na-ewepụ ikike ịchụ ndị ọrụ site na kuki ndị ọzọ.
Nke a pụtara na ọwa ekwentị mkpanaaka dị ugbu a dị mkpa karịa, n'agbanyeghị na ọtụtụ ụdị ka na-ejikọ ọnụ na mkpọsa mgbasa ozi dị iche iche na-eme ka ọdịiche dị n'etiti ịntanetị na ọdịnala dị iche. mobile izizi na-eru nso.
Enwere ọtụtụ ihe mgbu, ọkachasị enweghị ID onye ọrụ na-agbanwe agbanwe gafee nyiwe na ọwa dị iche iche. Onye ọrụ njedebe na-emekarị ka ọ bụrụ ihe karịrị spam, na ozi ika ahụ na-ejedebe na-ekwekọghị ekwekọ - ma ọ bụ na-efunahụ ya kpamkpam.
Upstream mepụtara ya -eto mobile marketing n'elu ikpo okwu na a onu ogugu enwere ugbua. O kpughere ikpo okwu dị ka ọrịa COVID-19 mere ka ụwa gbadaa ma mee ka itinye aka na dijitalụ bụrụ ihe dị mkpa kama ịbụ okomoko maka ọtụtụ azụmaahịa.
Yabụ kedu ihe na-eto eto?
Ka anyị malite na ihe ndị bụ isi. Toto bụ ikpo okwu ahịa dijitalụ na-enyere ndị otu aka ịnapụta njikọ aka ndị ahịa ọtụtụ ọwa, ọkachasị site na ngwaọrụ mkpanaka, na-eji ọwa dị ka webụsaịtị mkpanaka, SMS, RCS, ọkwa ngwaọrụ na netwọkụ mmekọrịta. A na-enye ya dị ka ikpo okwu ọrụ onwe maka akpaaka ahịa. Agbanyeghị, Upstream nwekwara onyinye ọrụ jisiri ike, nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ebe ndị ahịa enweghị mgbakwunye bandwidth ma ọ bụ nka iji mee mkpọsa mgbasa ozi dijitalụ ọkaibe.
Ikpo okwu na-achọ ịbụ a otu ụlọ ahịa na-akwụsị maka ika. Ọ na-achịkọta imepụta ọdịnaya, akpaaka mkpọsa, nyocha, nghọta ndị na-ege ntị, mgbochi mgbasa ozi na ikike njikwa ọwa n'ime otu ikpo okwu.
Nzọụkwụ mbụ bụ ihe e kere eke site na Ụlọ ọrụ mkpọsa ebe ndị ahịa nwere ike ịmepụta njem siri ike, ọtụtụ ọwa, na-enweghị ahụmịhe nzuzo ọ bụla. Ọ bụ ahụmihe nwere ọgụgụ isi, na-eji ịdọrọ na dobe wuo, dezie na ịhụchalụ ahụmịhe onye ọrụ ọ bụla.
Ọnụ ọgụgụ na-esote. Nke Ahịa ahia ngwá ọrụ na-enye ohere ka òtù na-akpaghị aka ahịa eruba kwa ahịa iji nweta ahaziri zuo ụzọ, nke mere na ahịa na ọnụ ọgụgụ ka nwere ike na-eche mkpa, contextually-mara na nkeonwe.
The Nlekọta ndị na-ege ntị na-enye ohere ka ụlọ ọrụ nweta, jikwaa, kọwapụta, nyochaa ma mee ka data ndị ahịa rụọ ọrụ maka mmezu mgbasa ozi ziri ezi nke na-agabiga usoro data bụ isi ka enwere ike kesaa mmefu ego nke ọma.
Ma mgbe ahụ, e nwere Nghọta na nchịkọta atụmatụ, nke na-etolite ọkpụkpụ azụ nke ikpo okwu Too. Site n'itinye nnukwu data n'ọrụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịkwalite mkpọsa iji mee ka ha na-arụ ọrụ nke ọma ka oge na-aga site n'ịchịkọta nghọta na arụmọrụ, ntinye aka, ịchụ nta, ego na ihe ndị ọzọ.
Nchedo site na wayo na-abịa site na Secure-D, Njirimara mgbochi aghụghọ nke Upstream, nke na-echebe site na mgbasa ozi wayo site na iji mgbochi mgbasa ozi arụnyere arụnyere, igbochi ụkpụrụ omume, usoro ikpochapụ ụgwọ, ọkwa ngwaọrụ butere, nhazigharị, nchọpụta ihe merenụ na interface echekwara.
Otú ahụ ka ihe niile si kwekọọ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'otú e si eji ikpo okwu eme ihe site n'ụdị ndị na-eche echiche n'ihu.
Site na nbibi nke kuki ndị ọzọ kwụsiri ike na mbara igwe, akara biya ama ama chọrọ ịmalite ịmalite mmekọrịta ya na ndị ahịa n'otu n'ime isi ahịa ya - Brazil. N'ihu mgbanwe dị otú ahụ ika ahụ chọrọ ịmalite ịmepụta ngwa agha nke mbụ onye data, n'ihi ya, ọ nwere ike ịmepụta ụzọ ziri ezi nke itinye ndị na-ege ntị na ịkwalite onyinye ọhụrụ - na mma ekenye ego ịzụ ahịa ya.
Site n'iji ya -eto N'elu ikpo okwu, ika ahụ nwere ike ịnweta ntọala ndị debanyere aha nke onye isi na-arụ ọrụ mkpanaka Brazil - na-enye 50MB nke data mkpanaka n'efu maka mgbanwe maka nkọwa ha. N'ime otu izu, ọ rụpụtala ihe karịrị 100,000 ndu. Nke a nyere ya nnukwu ọdọ mmiri nke atụmanya na ọ nwere ike itinye aka na zipu nkwalite ma megharịa ikike ahịa ya na mpaghara ahụ.
Onye ahịa ọzọ, onye isi ọrụ telecoms South Africa, chọrọ ịkwalite ọrụ nkwanye egwu ya dị larịị n'ahịa mpaghara ya. Otú ọ dị, onye ọrụ ahụ na-eche ihu n'ịzụ ahịa na ego ego n'ihi na mgbasa ozi ahịa gara aga emebeghị nke ọma. Ogologo oge, ọ chọrọ ọrụ ọhụrụ ahụ iji soro Spotify na Apple Music mpi isi na isi wee bụrụ nnukwu ọrụ nkwanye egwu nke nhọrọ na South Africa.
N'ime ọnwa atọ mbụ nke mkpọsa ahụ, onye ọrụ ahụ hụrụ mmụba 4x dị egwu na ntọala onye ọrụ na-arụ ọrụ nke ọrụ nkwanye egwu ya. N'ime usoro mgbasa ozi nke ọnwa 8, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 2 (1.8 nde) ndị debanyere aha ọhụrụ ka a napụtara na ọrụ ahụ. N'ime naanị ọnwa 8, ika ahụ agbanweela ọrụ dị elu - mana nke na-adịghị arụ ọrụ - ọrụ dijitalụ ka ọ bụrụ isi iyi siri ike nke ego na-enweta ugboro ugboro na onye isi ahịa na mbara igwe.
Na nchịkọta, ebumnobi nke toto bụ ime ka ahịa mkpanaka dị mma ọzọ, na-enye ndị ọrụ njem njem ndị ahịa kachasị mma, ahaziri maka ọdịdị na mkpa nke onwe ha, na-ebute arụmọrụ ahịa na ọkwa ọhụrụ maka azụmahịa. E gosiputara ikpo okwu na-enye 3x ọnụego mkparịta ụka yana 2x ọnụego ntinye aka tụnyere mgbasa ozi dijitalụ ọdịnala, yana mkpa efu efu maka itinye ego n'ihu.
Emere nke a ahịa mkpanaka nke ọma.
Upstream bụ ụlọ ọrụ teknụzụ na-eduga n'ahịa ahịa mkpanaka na ahịa kachasị mkpa na-apụta n'ụwa. Ya mobile marketing automation platform, Toto, pụrụ iche n'ụdị ya, na-ejikọta ọhụrụ na ubi nke ahịa akpaaka na data, nche si online mgbasa ozi wayo, na multi-channel dijitalụ nkwurịta okwu iji na-eke ahaziri ahụmahụ maka ọgwụgwụ na-eri. N'ihe karịrị 4,000 mgbasa ozi ahịa ekwentị na-aga nke ọma, otu Upstream na-enyere ndị ahịa ya aka, na-eduga ụdị dị iche iche gburugburu ụwa, na-ekwurịta okwu nke ọma na ndị ahịa ha, na-abawanye ahịa dijitalụ na ịkwalite ego ha nwetara. A na-ezubere ndị na-azụ ahịa ijeri 1.2 n'ihe karịrị mba 45 na Latin America, Africa, Middle East na Southeast Asia.
Tags: Ugwu okuigbochi ụkpụrụ omumembụ onyeeto etomno ọwanjikwa ndị na-ege ntị mkpanakadata omume mkpanakanhazi oge mkpọsa mkpanakamkpagharị ọwa mkpanakamkpanaka mkpanakamobile keremobile igwe igwe datangwaọrụ mkpanakaaka ekwentimobile izizimobile njem na-ewumkpanaka kpimkpanaka kpisahịa efuakpaghị aka ahịa akpakamobile ahịa akpaaka n'elu ikpo okwumobile marketing mkpọsamobile arụmọrụ datamobile portalmobile push mobilema Ọkwamobile retargetingego ha nwetara na ekwentị mkpanaakamobile ụgwọ ọrụmobile nchemobile nkewamkpanaka mkpanakaezubere iche maka mkpanakamobile azụmahịa dataMusicamụma ai igbochiSpotifyelu ugwuupstream eto
Dimitris Maniatis sonyere Elu elu na 2017 gaa n'isi Secure-D. N'okpuru ọchịchị ya Secure-D tolitere ka ọ bụrụ ihe nturu ugo na-enweta ihe nrite, ikpo okwu nchekwa ụgbọ elu, nke ndị na-ahụ maka netwọkụ mkpanaka gburugburu ụwa tụkwasịrị obi. Ọ ghọrọ Upstream CEO na Jenụwarị 2020 wee duzie mgbanwe ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ ikpo okwu ire ahịa mkpanaka. Tupu ịbanye na Upstream, Dimitris nọ na mgbasa ozi site na 'ihe niile webụ', ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ ọ tọrọ ntọala na 2009.